kncc newsletter Sharing2 par Corporate Edition - Fichier PDF
kncc newsletter Sharing2 .pdf
Nom original: kncc newsletter - Sharing2.pdf
Ce document au format PDF 1.5aété généré par Microsoft® Word 2013, etaété envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/02/2016 à 16:18, depuis l'adresse IP 182.52.x.x. La présente page de téléchargement du fichieraété vue 328 fois.
ီ ညာေ ရးမူဝါဒ (အကြမ်း)
အေ ခခံရမည် အချကျား
1. Federal Education - ဖယ်ဒရယ်ပညာေ ရး
3. Early Childhood Education -ရေးဥးကေလးပညာေ ရး
4. Basic Education -ေေ ခခံပညာေ ရး
5. Higher Education - ဆေင်
မင် ပညာေ ရး
6. Informal Education -ကောင်းပင်ပပညာေ ရး
7. Inclusive Education - လူတိုင်းကေးဝင်ပ
ံ ညာေ ရး
8. Special Education - မသန်စမ
ွ်းတေတကအထူးပညာေ ရး
9. Curriculum - သင်ိုိုိုးညညန်းတမ်း
10. Budget - ဘဏ္ဌာေ ငင်
1. ဖယ်ဒရယ်ပညာေ ရးစနစ် (Federal Education)
ရးစနစသ ည် မိမိတိုို ကရင်နမျးိုးနိ င ယ်ွိုိုတေတင်း
စည်းလိုံးညညညတ်မျိုးန င်ခေားတိုင်းရင်းသားလူမးမိာျးိုးန င် ငြ်ိမ်းခမ်းငစာ
တ နထိုင်ေ ရးကို ဥးတည်မည်။
ကာင်းမားကို မိမိ ပည်နညယ်တင်းတတင်သာမက
ေ ခား ပည်နယ်ေ ဒသမားတတင်လ ည်းငဖင် လစသ င်ကြားပိုန်င်ွင် ရိရမည်။
၃။ ကရင်န ပညည်တင်းကရင်နမေးသားပညာေ
ရး တေတက် လိုပေသ ည် ဘတဂက်ားကို
ျိုးန င် လိုပေသ ည် ဘဏ္ဌာေ ငင်ေား
ခခွဲေ ၀ခမတ်ေ ပးရမည်။
ရးစနစ် စတင်ဒေသျိုးန င် ကိုကညသည်
သင်ိုိုိုးညညန်းတမ်းမားကို လွှတလန်ပွာ
ပဌါန်းကင် သိုံးပိုန်င်ွင် ရိရမည်။
kncc newsletter - Sharing2.pdf (PDF, 2.5 Mo)
Fichier PDF kncc newsletter - Sharing2.pdf
school chapter students scholarship their education future during myanmar program karenni government community student about
Ce fichieraété mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00397171.